C.ronaldo oo Rebert Lewandowski ka dalbaday inuu Real kula soo biro
Home Sports C.ronaldo oo Rebert Lewandowski ka dalbaday inuu Real kula soo biro
Sida ay maanta qoreen qaar kamid ah warbaahinta Spain Kabtanka Real Madrid Sergio Ramos iyo weeraryahanka kooxdaas Cristiano Ronaldo ayaa weeraryahanka Bayern Munich Robert LEWANDOWSKI ka dalbaday inuu xagaaga soo aadan kula soo biro Real Madrid.
Markii ay soo dhamaatay ciyaartii Habeen hore dhex martay Madrid iyo Bayern Munich, ayaa waxaa la arkayay C.ronaldo oo xabadka galinaya weraryahanka reer Poland Lewandowski waxaana la arkayay iyagoo hadalo is dhaafsanay.
Labada xidig ayaa is dhaafsaday hadalo kooban, inkastoo aan si rasmi ah loo ogeen hadalada ay is dhaafsadeen hadana wargeyska AS ayaa daabacay in Cristiano uu Robert ka dalbaday inuu xagaaga soo aadan kula soo biro Real MADRID.
C.ronaldo kaliya maahan ee sidoo kale Kabtan Ramos ayaa si aad ah ula dhacsan weeraryahanka Bayern wuxuuna doonayaa in xagaaga xiga uu qeyb ka noqdo kooxdooda.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) oo xalay khadka...
[Warbixin] Guddoomiyaha Golaha shacabka In La Doorto Maxaa Naga Xiga ?
Madaxweyne Farmaajo oo Sacuudiga u ambabaxay